ပြင်သစ် ရွေးကောက်ပွဲ ပထမအကျော့
ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် ပြင်သစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ ပထမအကျော့ကို စတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ယခုပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ယခင်Brexit အီးယူအဖွဲ့ကနေ အင်္ဂလန်နိုင်ငံခွဲထွက်သွားသည့်ကိစ္စနှင့် အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတို့လို နောက်ထပ် ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ပါသည်. ပြင်သစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အီးယူအဖွဲ့ကနေ ခွဲထက်ချင်နေသည့် အီးယူဆန့်ကျင်ရေးသမားဖြစ်သူ လက်ယာအမျိုးသားရှေ့ဆောင် အမည်ရှိသည့် နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Marin Le Penကလဲ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရွေးကောက်ခံဖို့ရှိနေပါတယ်. သူမသာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင် ယူရိုဇုန်မှာ brexitကိစ္စလိုမျိုးခွဲထွက်တဲ့ကိစ္စတွေ အကွဲအပြဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်. မာရင်လီပန်ရဲ့ အဓိကပြိုင်ဘက်တွေကတော့ ရီပတ်ဗလစ်ကန်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင် Francois Fillonနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူ Emmanuel Macronတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်. ယခုပထမအကျော့ သုံးယောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာ အသာရတဲ့ သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက်ကသာ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ ၂ရက်မှာပြုလုပ်မယ့် နောက်ထပ်ဒုတိယအကျော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်. အကယ်၍ မာရင်လီပန်သာ ယခုရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအခြေအနေကောင်းမွန်ပါက ယူရိုငွေကြေး တန်ဖိုးကျဆင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်.